Dowladda Soomaaliya oo beenisay in mashruucii biyo xireen dowladda Talyaaniga lanoqotay | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dowladda Soomaaliya oo beenisay in mashruucii biyo xireen dowladda Talyaaniga lanoqotay
Dowladda Soomaaliya oo beenisay in mashruucii biyo xireen dowladda Talyaaniga lanoqotay
Wasiirka Beeraha dowladda Soomaaliya Saciid Xusseen Ciid oo la hadlay VOA ayaa beeniyay in dowladda Soomaaliya ay gudbin weyday mashruuc la doonayay in biyo xireen loogu sameeyo magaalada Beledweyne oo ay dalbatay dowladda Talyaaniga.
Wasiirka ayaa sheegay in dhaqaalihii loogu tala-galay biyo xireenka in aysan la noqon dowladda Talyaaniga halkiisiina uu yahay Dowladda Soomaaliya –na gudbisay dhamaan wax-yaabihii laga dalbaday.
‘’Markii horeba is faham ayuu ahaa arinkan, laakiin saxiix rasmi ah ma uusan jirin, Talyaanigu –na mabda’ahaan ayuu aqbalay mashruucan ee marka la saxiixayo waa in labada dhinac isaga yimadaan oo sidaa lagu saxiixaa mashruuca, waxey shardi ka dhiggeen in la keeno mashruucii oo dhameystiran cidda fulineysana la sheego, wax-yaabahaa ayeey sharuud ka dhiggeen, Annagana waan u gudbinay mashruucii waa la dhameystiray dhawaanna waa la saxiixayaa’’ ayuu yiri Wasiir Ciid.
Wasiir Ciid oohadalkiisa sii wata ayuu sheegay in mar walba hay’addaha deeqaha bixiya iyagu u madax-bannaan-yihiin in waqtiggii ay doonaan dhaqaalahooda bixiyaan, hasse ahaatee marnaba uusan jirin wax gaabis ah oo ka yimid dowladda Soomaaliya ama xitaa dowalad gobolleedka Hirshabeelle.
magaalada Beledweyne Fatahaadii ugu danbeysay ayaa sababtay dhimashada ku dhawaad 20 ruux, burbur hantiyeed iyo waliba in dibadda magaalada ilaa iyo hadda ay ku daruufeysan yihiin kumannaan qoysas ah oo ka barakacay guryihiin ay ku noolaayeen.
Dadka ku nool magalada markad la sheekeysato waxay kuu sheegayan in mar uun xal loo helo biyahan sanad walba ku soo fataha magaalada .